हाम्रो लागि के सुत्नेसमय तयार: के चिहान सपना?
एक पटक एक समय मा मान्छे जमीन मा मरेको मुर्दा गाड्नु सम्म आएका छन्। भन्ने पहिलो चिहान थिए जब हो। को चिहान के हो? यो क्षेत्रमा केही भाग, मृत व्यक्ति वा दाहसंस्कार पछि आफ्नो खरानी को निपटान को लागि अभिप्रेरित छ। यो हामी सबै स्वामित्वमा छ भन्ने न्यूनतम जानकारी छ। तर यो सबै मा त्यहाँ सिक्का अर्को पक्ष हो - रहस्यमय। हामी धेरै आफ्नो सपना यी नै चिहान हेर्नुहोस्। यसलाई के मतलब चिहान को जब सपना गर्छ? यो किन छ? हामी हाम्रो लेख सिक्न।
किन चिहान को सपना? सपना व्याख्या गुस्ताव मिलर
चिहान को सपना र बिल्कुल शान्त हुन - लामो र सुखी जीवनको लागि।
यो पुरानो र त्यागेर सपना छ भने, त्यसपछि वास्तविकता मा तपाईं एक तीतो जानेबेलामा आशा। तपाईं प्रिय छोड्न हुनेछ।
को जाडो मा चिहान मार्फत हिड्ने - आफ्नो आमाबाबुको घर को हेरविचार गर्न।
तपाईं सपना भने, तपाईं कसैको गम्भीर मा रुन - लागि तयार एक निराशाजनक स्थिति। भविष्यमा, तपाईं जिम्मेवार निर्णयहरू मा बन्द पकड गर्नुपर्छ।
किन को सपना चिहान? सपना व्याख्या बाबा Vanga
मानिसहरू यो सपना राम्रो हुन हुनेछ प्रेम। जुदाई, छेउमा विश्वासघात र विवाह को संभावना कार्डहरू एक घर जस्तै पतन हुनेछ।
पुरानो मान्छे को निरन्तर सपना छ जो चिहान, आफ्नो आसन्न मृत्यु portends।
तपाईं सेतो फूल को चिहान हो भने तपाईं एक सुखी परिवार हुनेछ।
अँध्यारो ठाउँमा मा जाडो पैदल तपाईं कुनै पनि राम्रो गर्न छैन। तपाईं चाहनुहुन्छ र गरिबी मा बस्नेछन्। तपाईं afloat रहन हरेक प्रयास गर्न हुनेछ।
खराब सपना निम्नानुसार छ: उनको विवाह भएको चिहान मा स्थान लिइरहेको छ रूपमा दुलही सपना - यो दुर्घटनामा पतिको छिटो मृत्यु प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ।
किन चिहान को सपना? सपना व्याख्या जूनो
सपना मा, चिहान मार्फत हिंड्न? वास्तविक जीवनमा, तपाईं एक्लै बाँकी भइरहेको जोखिम।
पुरानो र त्यागेर चिहान - वृद्ध को मृत्यु। यो एक शाब्दिक सपना छ।
तपाईं चिहान मार्फत crawling बारेमा सपना भने, माटोको मा गाडे वा तपाईं कुनै तरिका को हिड्ने मृत पछि लाग्न, आफ्नो जीवन सोच्न: तपाईं गहिरो तालिका delaying, त्यसैले भविष्यमा जीवन धेरै कठिन हुनेछ।
तपाईं धनी र सुन्दर गम्भीर Steles र Tombstones संग राम्ररी कायम देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ चिहान, आफ्नो एक प्रेम को पुन: प्राप्ति बारे बोल्न। बाटो, मानिसहरू धेरै यो के एकदम अक्सर सपना छ।
सपना मा, चिहान clouded? तपाईं, यो एक बहाना ढाकिएको थियो हेर्न? वास्तविक जीवनमा, तपाईंले आफ्नो प्रियजनलाई वास्तै भुक्तानी गर्न प्रयास छैन। यसलाई आफ्नो सहयोग र समर्थन गर्न अत्यावश्यक छ, यसको बारेमा सोच्नुहोस्।
किन चिहान को सपना? सपना व्याख्या Hoss
आफ्नो प्रियजनलाई संग जानेबेलामा को सपना पुरानो चिहान। यो तीतो हानि संग गर्न केही छ रूपमा सुत्न, सकारात्मक हुन मानिन्छ। सायद, तपाईं बस शहर वा देश छोड्ने।
जीवन्त र उज्ज्वल रंग, जो तपाईं Steles र Tombstones आफ्नो निद्रामा निरीक्षण गर्न सक्छन्, आफन्तहरूले र मित्र को दीर्घायु बारेमा बोल्न।
तपाईं चिहान को वातावरण संग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, र चिहान नै शान्त र सुन्दर छ भने, तपाईं एकदम आफ्नो जीवन को पाठ्यक्रम सन्तुष्ट छन्। यो flown वर्ष को bygone दिन बारेमा पातलो र हल्का दुःख छ, किनभने आफ्नो मन उतेजित गर्नु गर्न सक्ने अधिकतम ...
किन छैन जो एक छोरा, को सपना?
के सपना स्थान: एक सपनाको व्याख्या
सपना समाधान: सपनामा मर्न - यो मतलब? सपनामा मरेको नातेदार के हेर्न?
सपना पुस्तक खुला: crumbling दाँत - समस्या गर्न
असल वा छैन - सपना विवाह: सपना पुस्तक सोध्न?
बाल स्टाइल - छवि पूरा गर्न स्टाइलिश स्पर्श
औषधि "Relaksozan": समीक्षा, प्रयोगको लागि निर्देशन
Tabernaemontana: घर, फोटो, प्रजनन मा हेरविचार
के तिपाई, यसको आवेदन उपकरण र
Psychoneurological dispensary को बारे मा। निजेनी नोव्गोरोड